Ihe nkiri na-eme mkpọtụ, Pof Ada Ada Wrap - GS PACK
Nnukwu Silver Pack (ShenZhen) Co., Ltd.
Nnukwu Silver Pack (Shenzhen) Co., Ltd. isi ụlọ ọrụ dị na Hongkong, nke e guzobere na 1993, ọ dị n'akụkụ ọmarịcha ezumike nke Shiyan Lake. Ebe ezumike na GuangMing New District, Shenzhen, China. Njem nkeji 20 gaa Shenzhen International Airport. Anyị bụ otu n'ime ndị kasị ibu ọkachamara na-emepụta na-amị polyolefin Ada Ada film na China. Na mbụ nnukwu onye rụrụ n'ebe ndịda China onye nwere ihe karịrị afọ 19 ahụmahụ na n'ichepụta mekotaonwe nkwakọ ngwaahịa.
High Piel Biodegradable POF okpomọkụ Ada Ada ...
Factory Tụkwasịnụ uzo Polyolefin POF Okpomọkụ ...
GS Super 10 Micron Polyolefin Ada Ada Film
GS Hot Igbapu Polyolefin Ada Ada Film
GS Soft & Low okpomọkụ P OF Ada Ada Film
Ime ihe n'eziokwu, imeghe na ndakọrịta, mmepe kwekọrọ, ma mepụta ọnọdụ mmeri; Na-adị ndụ site n'ịdị mma, mepee aha ọma, na uru site na njikwa; Nsonye zuru oke, mee ka njikwa siri ike, gbalịsie ike maka izu okè, ịdị mma ...
Obi ekele, ziri ezi, lekwasị anya, dị uchu, ma na-ekwenye ekwenye; Igha, nkwekorita, ihe ohuru, nkwukọrịta, na mmeri; Gaa n'ihu, merie, lụọ ọgụ, kpaa nkata, gbajie, nweta
Mmata nke ọma dị m n’obi, na ngwaahịa mma dị m n’aka; Kpachapụ anya, lezie anya, ma na-etinyekwa uche, ka ndị ahịa wee nwee ntụkwasị obi na anyị; Jiri obi kee ihe, jiri obi ike mee ihe, ma bie ndụ obi-ụtọ
Ihe dị iche na etiti PE / PVC / POF na-adalata ihe nkiri
1. Nkọwa dị iche iche: Ihe nkiri Pee bụ ezigbo ihe ike, ọ naghị adịkwa mfe ịzọpịa ya na ndị na-akpụcha plastik nkịtị. Ebe ọ bụ na ihe nkiri PE dị nro ma sie ike, ọ dịghị mfe ịkpụchasị ya, na-ekwughị oke okpomọkụ nke ngwá ọrụ na nnukwu ọsọ, nke ga-eme ka LDPE gbazee na mgbasa ozi ...
Gbanwee nhazi fim
A na-eji ihe nkiri ịbelata eme ihe n'ahịa na usoro njem nke ngwaahịa dị iche iche. Isi ọrụ ya bụ imezi, kpuchie ma chebe ngwaahịa a. Ihe nkiri ịda mbà ga-enwerịrị nguzogide mgbapu dị elu, ezigbo shrinkage na nrụgide mbelata ụfọdụ. N'ime usoro mmebi ahụ, ihe nkiri a enweghị ike imepụta ...
Ajula m ihe na-eme ka okpomoku POF ...
POF ihe nkiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ezukọta na iji ihe eji eme ihe na akwụkwọ dị iche iche. Ihe nkiri a na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị isi, na-eguzogide mmanụ, yana ihe nkiri na-edozi ahụ maka ahụike, na-enye ndị na-emepụta ohere iji agba agba na-ele anya iji nweta akara ngosi aha 360 Celsius. Nye zuru play na creativity na n'echiche, nke mere na ...
Onwere ihe di iche na POF na ya ...
Onwere ihe di iche n’etiti POF na ihe nkiri na-ekpo oku? POF pụtara ihe nkiri na-ekpo ọkụ. POF zuru aha a na-akpọ multi-layer co-extruded polyolefin okpomọkụ shrinkable film. Ọ na-eji linear low-density polyethylene dị ka akwa oyi akwa (LLDPE) na co-polypropylene (PP) dị ka ime na oute ...
Polyolefin Pof Ada Ada Film, Polyolefin Ada Ada Kechie Okpomọkụ, Ihe Nlere Anya Vs Wrink Wrap, Adalata Nkume ịkwanyere, Adalata Kechie Film apụta, Polyolefin Pof Ada Ada Wrap,